China sei anoita mweya pamwero fekitari uye vagadziri | Jiabei
The sandara chubhu kwomudzimu pamwero yakaitwa regirazi. Rusvingo chechetere chubhu yomukati chinhu curved pamusoro neumwe nharaunda pamusoro curvature. The chubhu ine mvura. Kana pamwero iri tilted, ari matema iri pamwero chubhu chipe kupera chechetere kuziva padanho chinzvimbo. The yakakura nharaunda pamusoro curvature chorusvingo chomudzimu pamwero yomukati, dzakanga chisarudzo, uye vashoma chete nharaunda yose curvature, ari kudzikisa echisarudzo chacho. Naizvozvo, kuti nharaunda yose curvature chomudzimu pamwero kunotema rakarurama mweya chechetere. The mweya pamwero dzinowanzotsigi- kushandiswa aongorore flatness, straightness, verticality uye zvido zvevanhu chinzvimbo midziyo kuisa siyana muchina maturusi uye workpieces. Kunyanya kana kuyera verticality, kuti rinobva pamwero anogona nyura pamusoro hunyambiri nokushanda pamusoro pasina Chinyorwa rutsigiro, izvo kunoderedza basa zvakanyanya uye angasafa nokuyerwa kukanganisa kwakakonzerwa muviri wacho kupisa nemwaranzi kusvika padanho.
Nechepasi uye divi mweya pamwero vari kurudyi-angled hurongwa vane kureba 2000mm, uye kururama Kazhinji (0.02-0.025) mm / m. Kana mushandisi anonyanya zvinodiwa, chinogona customized nomumwe. The zeroing mamiriro mudzimu pamwero yakasiyana nedzimwe, zvichienzaniswa kwakajairika mamiriro: 1. Nyore razero. 2. Mushure kuchinja, zero nzvimbo hakusi nyore kune shanduko. Sezvinoratidzwa muna Figure 1. Apo V serin'i paburi pasi kwomudzimu pamwero rotates kunhivi chinoumba akabatana kuti 5 nguva, kana matema kutama, unogona zvinodiwa nokuchinja kubva sikuruwa 2. chinhu ichi kwave kugadziridzwa panguva fekitari uye kazhinji kuchinja.
Nemamiriro romudzimu pamwero kunoenderana kupatsanura. Pamatanda mhando mweya pamwero unowanzoonekwa rinoumbwa mweya pamwero mukuru muviri, ane chinjikira pamwero, imwe adiabatic mubato, mumwe mukuru pamwero, nechifukidzo ndiro uye razero kuchinja mudziyo. Mutongi pamwero unowanzoonekwa rinoumbwa muviri pamwero, nechifukidzo ndiro, imwe huru pamwero uye razero kuchinja mudziyo.
The mweya pamwero anoshandisa mudzimu pamwero sezvo tambo chishandiswa kuyera uye kuverenga zvinhu. The pamwero ane chisimbiso regirazi chubhu, uye chidimbu longitudinal womukati pamusoro chinhu raundi riemukaari pemvura neumwe nharaunda pamusoro curvature. The girazi chubhu yacho chechetere yakazara imvura ine pasi viscosity coefficient, akadai doro, Eteri chacho nezvakasanganiswa. Chikamu pasina mvura inowanzodeedzwa pamwero sefuro. Pane imwe ukama pakati nharaunda yose curvature pakati Muchikamu longitudinal womukati pose girazi chubhu uye kudzidza kukosha. Maererano ukama ichi, kwakarerekera akayera ndege kuyerwa.
Post nguva: Jan-09-2020
Total Station , mutiraipodhi , 8 Line And 4 Horizontal Line , mugamuchiri , Wall chikomboredzo , Vh-525 Five Line ,